Dolland Trump Oo Ku Horeeya Doorasha Guud Ee Mareykanka Iyo Midda Electoral College-ka – Goobjoog News
Waxaa hadda socda Dooroshooyinka dalka Mareykanka oo ay ku tartamayaan labada musharax oo kala ah Trum iyo Hillry Clinton hadda wali doorashada way soctaa .
Labada Murashax ee Mareykanka ayaa codadkooda talaadadii ka dhiibtay New York, doorashada ayaa ku socota sida uu rabay Dolland Trump.
Ilaa iyo hadda waxaa uu ku guuleystay gobollada: Utah, Idaho, North Carolina, Florida, Georgia, Ohio, Missouri, Montana, Louisiana, Arkansas,Kansas, North Dakota, South Dakota, Texas, Wyoming, Alabama, West Virginia, Kentucky, Oklahoma, South Carolina, Tennessee and Indiana.
Halka Clinton ay ku guuleystay California, Hawaii, Oregon, Washington, Colorado, Virginia, Illinois, New York, Connecticut,Rhode Island, Maryland, Massachusetts, Delaware, New Jersey, Vermont and Washington,
Dhanka kale, Electoral Colleg-ka ayaa waxaa ku horeeyay Dolland Trump oo heysta 244 halka Hilary 215 cod, waxaa laga rabaa qofka noqonaya madaxweynaha in uu helo 270 cod, isagana waxaa uu heystaa 254 cod.
Doorashada Senet-ka Dimoqoraadiga 46 kursi halka Republican-ka heystaan 48 kursi, aqalka hoose 159 dimoqoraadiga halka Republicanka heystaan 222 kursi.
Doorashada kala soco, Goobjoog News